पावरफुल स्टार रेखा थापाको किन चल्न छोड्यो जादू ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०३:३३ |
लगातर डेढ दशकसम्म नम्बर वान अभिनेत्रीका रुपमा रहेकी नायिका रेखा थापा यतिखेर भने फ्लप नायिकामा रुपान्तरण भएकी छिन् । यो वर्ष रेखाका तीनवटा चलचित्र रिलिज भए । तर ती सबै चलचित्र फ्लप भैदिएपछि ओरालो लागिरहेको रेखाको करियरमा कतै ब्रेक पो लाग्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । आखिर किन ओरालो लाग्दैछ त रेखाको फिल्मी करियर ?
आजभन्दा डेढ दशक अघि निर्माण भएको चलचित्र हिरोबाट डेब्यू गरेकी रेखा थापाले पहिलो चलचित्रबाटै नेपाली दर्शकहरुमा राम्रो छाप छोड्न सफल भइन् । त्यस लगत्तै निर्माता छविराज ओझासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्न थालेपछि रेखालाई चलचित्रको कुनै कमी भएन । तत्कालीन समयका एकोहोरो शैलीका अभिनेत्रीहरुको भीडमा रेखाको चमकदमकयुक्त हाउभाउ र व्यक्तित्वबाट उनी छिट्टै मार्क हुन सफल भइन् ।
एकपछि अर्को सफल चलचित्रहरु दिन थालेकी रेखाको स्टारडम सुपरस्टार मानिएका नायकहरु भन्दा कुनै कमी थिएन । रेखाकै अनुहार हेरेर पनि दर्शकहरु हलमा ओइरिन थालेपछि चलचित्र उद्योगकै एक्ला सुपरस्टार अभिनेत्री रेखालाई नै मान्न थालियो ।
कुनै समयकी पावरफुल स्टार रेखा थापा पछिल्लो केही वर्ष यता भने निरन्तर ओरालो लाग्दैछिन् । एकपछि अर्को चलचित्र असफल हुँदै आएकी रेखाको यसै वर्ष आएका तीन चलचित्र सुपर फ्लप भए । यसको प्रमुख कारण रेखाले समयअनुकुल आफूमा परिवर्तन गर्न नसक्नु रहेको समीक्षकहरुको बुझाइ छ । लामो समयदेखि चलचित्र पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार एवम् निर्देशक डब्बु क्षेत्रका अनुसार रेखाले अब आफ्नो उमेरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर विगत १५ वर्षदेखि हेर्दै आएको भूमिकाबाट रेखाले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु उनको कमजोरी रहेको पत्रकार क्षेत्रीको ठम्याई छ ।
अर्का समीक्षक एवम् चलचित्र लेखक सामीप्यराज तिमिल्सिनाको बुझाइमा रेखा अहिले पनि राम्रो सिने मेकर हुन् । रेखाको पछिल्लो चलचित्र रुद्रप्रिया त्यसैको उदाहरण भएको उनी बताउछन् । तर रेखाले अब भने स्क्रिनमोह त्याग्नसक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बढ्दो उमेरको ख्याल नगरि अझै टिनेजर्स शैलीको भूमिका रोज्नु रेखाको महाभूल भएको समीक्षक तिमिल्सिनाको भनाइ छ । उनी भन्छन्–रेखा त्यतिबेलासम्म स्टारभ्यालूमा रहिन् जतिबेलासम्म दर्शकहरुको बुझाइमा चलचित्र भनेको एकछिनको मनोरञ्जन र नौटंकी मात्र हो भन्ने थियो । तर अहिलेका दर्शकहरुले चलचित्रलाई कलाको सबैभन्दा सिरियस माध्यमको रुपमा बुझिसकेका छन् । दर्शकमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्दा रेखा थापा नयाँ दर्शकका आँखामा पर्न सकिनन् ।
केही वर्ष यता रेखा मूलधारको राजनीतिमा पनि खुलेरै लागेकी छिन् । हाल उनी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा केन्द्रीय सदस्य छिन् । यसरी राजनीतिमा खुलेर लागेकोले पनि रेखाको प्रशंसक घट्दै गएको समीक्षक क्षेत्रीको अनुमान छ ।
तर अर्का समीक्षक तिमिल्सिना भने राजनीतिका कारण रेखाको करियर ओरालो लागेको मान्न तयार छैनन् । विश्वमा अहिले सेलिब्रेटीहरु राजनीतिमा होमिने ट्रेण्ड नै चलिरहेको उनको तर्क छ ।
रेखाको फिल्मीग्राफलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पति छविराज ओझासँग अलग भएपछि निर्माण भएका उनका चलचित्रहरुले खासै सफलता पाउन सकेको देखिदैन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उनको कन्ट्रोभर्सीयुक्त जीवनशैलीका कारण पनि रेखासँग दर्शकको मोह घट्दै गएको छ ।
Previousन्यूजिल्याण्डले भारतलाई ४० रनले हरायो
Nextविराट कोहली पुगे २८ , यसरि मनाए जन्मदिन ( भिडियो सहित )
७ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०३:१२
आज हरिबोधिनी एकादशी, तुलसीको पुजाआराधना गरी मनाइँदै
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०४:०९